बढ्दै नेकपाको द्धन्द्ध, प्रधानमन्त्री ओली किन पार्टी बैठकको सामना गर्न चाहादैनन ? – Mission Khabar
बढ्दै नेकपाको द्धन्द्ध, प्रधानमन्त्री ओली किन पार्टी बैठकको सामना गर्न चाहादैनन ?
मिसन खबर २१ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १८:५९
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बैठक बोलाउन आग्रह गर्ने भएका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा शुक्रबार दिउँसो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमा सहभागीहरुले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष बैठक बोलाएर समस्याको हल गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
प्रचण्डले बोलाएको सचिवालय बैठकमा ओली पक्षीय सचिवालय सदस्यहरु भने सहभागी थिएनन् । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रचण्डसहित बैठकमा सहभागी ५ जना सचिवालय सदस्यहरुले शनिबार बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठक बोलाउन र संकट समाधानमा भूमिका खेल्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको बताए । बैठकमा प्रचण्डसहित नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री ओली, इश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल भने बैठकमा सहभागी भएनन् । सत्तारुढ दल नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई सचिवालय बैठक नडाक्न चेतावनी दिएको समेत खुलासा भएको छ । बैठक डाके त्यही कुरा पार्टी फुटको प्रस्थान बिन्दु हुने चेतावनी ओलीले दिएपछि आफूले अनौपचारिक बैठक बोलाएको दाहालले नेताहरुलाई बताएका थिए ।
बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता तथा सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले आजको बैठक अनौपचारिक भएको र अध्यक्ष ओलीकै सहमतिमा छलफल गरिएको दाबी गरे । पार्टीमा केही समयअघि देखा परेका समस्या सम्बोधन र समाधान गर्न स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो। बैठकले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गरेको थियो। विधि र पद्धतिअनुसार संस्थागत ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्ने तथा चैतमा एकताको महाधिवेशन गर्ने निष्कर्ष निकालेपनि नेकपामा पार्टी पद्धती र सर्वसम्मतिको निर्णय कार्यान्वयन भन्दापनि व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी भैरहेको छ । सचिवालय सदस्यहरुले लिखित र मौखिक रुपमा पनि तत्काल सचिवालय र अन्य निकायको पनि बैठक बसेर आवश्यक निष्कर्ष निकाल्न अध्यक्षहरुलाई अनुरोध गरेको बताउँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले राष्ट्रियता, स्वास्थ्य संकट, जनजिवीकाका सवाल, स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया आदिबारे कार्यकारी अध्यक्षले पनि बैठक बोलाउन ओलीसँग आग्रह र प्रयत्न गरेको स्मरण गराएका थिए । तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफू राजीनामा नदिने बैठक पनि नबोलाउने भन्दै सार्वजनिक रुपमै पार्टी र पद्धतीलाई चुनौति दिइरहेका छन् । अझ प्रधानमन्त्री ओलीले आफू बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने खेल भएको भन्दै राजनीनामा नदिने र कोटेश्वरको षड्यन्त्रको सामना गर्ने भन्दै उग्रवाद प्रदर्शन गरिरहेका छन् । बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले समेत आफू अल्पमतमा पर्ने डरले पार्टीको बैठक पनि नबोलाउने र अर्का अध्यक्षले बोलाएको बैठक र निर्णय नमान्ने भन्दै ओलीले चुनौती दिएको बताइरहेका छन् ।
आखिर प्रधानमन्त्री ओली किन नेकपा बैठकको सामना गर्न र पार्टी पद्धती अनुसार चल्न चाहादैनन त ? राजनीति विश्लेषक प्राडा सुरेन्द्र केसी ओली प्रचण्डमा एक अर्कालाई स्विकार्न नचाहाने हठ बढेको बताउँछन् । देश र जनताका लागि सोच्न नसक्ने नेताहरु पछिल्लो समय पाटी भन्दा पनि गुट र स्वार्थ समुहको नेता बनेका कारण पनि नेपाली राजनीतिमा भाडभैलो भएको उनी बताउँछन । नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलो थप बढ्छ वा स्वार्थको व्यवस्थापनसँगै केही समयका लागि मथ्थर हुन्छ ? यसमा अध्यक्ष द्धय ओली र प्रचण्डको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ ।